URURKA HANAD:"DALKA IYO DADKA HA LOO TURO"..
Friday July 08, 2011 TWITTER FACEBOOK PRINT THIS PAGE SEND TO YOUR FRIEND
Haweenka ku mideysan ururka Hanad oo ujeedooyinkii loo aas aasay ay ka mid ahaayeen ka shaqeynta Nabadda iyo dib u heshiisiinta ayaa ku baaqay in Dalka iyo dadka loo turo isla markaana Nabadda laga shaqeeyo.
Hadalkan ayaa Mas'uuliyiinta ururka waxa ay ka sheegeen Munaasabad laba u jeed xanbaarsaneed oo maanta ka dhacday gudaha Magaalada muqdisho, taa oo ay ugu dabaal dagayeen sanad guuradii labaad ee ka soo wareegtay xiligii la aas-aasay ururka, waxaana sidoo kale ku lamanaa munaasabada caleema saarka gudoomiyaha ururka oo loo doortay Ruqiya Cali C/lle.
"Dalka Nabad ha loo daayo, Dadkana Nabad ha loo raadsho, Ragow Dalka Nabad u raadsha, Nabadaa Naas la nuuga leh, Nabad la'aan waa nolal la'aan" ereyadaasi iyo kuwa kale oo badan ayaa ka mid ahaa oraahda ay adeegsanayeen Haweenkii ka qeyb galay Munaasabadaasi.
Dahabo Sheekh Maxamuud oo ah guddoomiye ku xigeenka HANAD ayaa ka hadashay munaasabadaasi isla markaana si qota dheer uga sheekeeysay Dhibaatooyinka Haweenka ku heesta Dalka iyo dibad ayaa ka dalbatay dhinacyada ku loolamaya siyaasada in ay Xabada joojiyaan isla markaana ay u turaan Haweenka iyo Caruurta.
"Waxaan geed dheer iyo geed gaaban u fuuli doonaa sidii Nabadda iyo dib u heshiisiinta looga shaqeyn lahaa isla markaana waxaan kaashan doonaa cid walba oo ay suurta gal tahay in arinkan ay naga garab siiso" sidaa waxaa yiri gudoomiyaha Cusub ee Hanad Ruqiya Cali Cabdi.